FIATREHANA NY COVID19 SY NY KERE AMIN’NY FARITRA ATSIMON’NY NOSY – Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
FIATREHANA NY COVID19 SY NY KERE AMIN’NY FARITRA ATSIMON’NY NOSY
Manoloana ny fisian’ny valan’aretina covid-19 sy ny kere mianjady ny Faritra Atsimo dia nanatanteraka fihaonana tamin’ny mpanao gazety tao amin’ny Motel Anosy ny Minisiteran’ny Mponina izay notarihin’Andriamatoa Tale Jeneralin’ny Fiahiana ara-tSosialy, BNGRC ary ny FID.
Nampahafantarina ireo mpanao gazety ny tetik’asa fiahiana ara-tsosialy eo anivon’ny Minisiteran’ny Mponina izay vatsian’ny Banky iraisam-pirenena vola. Nitondra fanazavana momba ny fiatrehana ny voina sy ny fanarenana ny Tale Jeneralin’ny Fiahiana ara-tsosialy, ny BNGRC kosa nampahafantantra ny tena andraikiny manoloana izany. Ny FID no miantoka ny fanatanterahana ny tetik’asa.
Izao dia tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana ny politika ankapoben’ny Fanjakana. Tanjon’izao tetik’asa izao ny hametrahana paik’ady hiatrehana sy ho fanarenana taorian’ny fihibohana.
Tontosa ny fifanaraham-piaraha-miasa amin’ny CRS sy ny Minisiteran’ny Mponina, ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampivoarana ny Vehivavy amin’ny alalan’ny tetik’asa MAHARO izay vatsian’ny USAID	MAROANTSETRA, miasa ho an sokajin’olona rehetra ny Minisiteran’ny Mponina hoy ny Minisitra Michelle Bavy Angelica